Yourlọ ahịa dijitalụ gị ọ dị mkpa maka akara ngosi? | ECommerce ozi ọma
Yourlọ ahịa dijitalụ gị ọ dị mkpa maka akara ngosi?
O nwere ike ịbụ na ịmaghị ihe "Tokenize" pụtara ma ọ bụ, ọ bụrụ na ịmaghị, ịmachaghị nke ọma uru ọ ga-erite maka azụmaahịa gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na etinyere ya na ngalaba gị. Ọ bụ ya mere anyị ji achọ ịnakọta n'isiokwu a uru nke tokenization na ịkwụ ụgwọ na ya ngwa dị iche, nke emechara chịkọta na ahụmịhe ndị ahịa ka mma na ahịa dị elu maka azụmaahịa ahụ, dịka ntuziaka Sipay setịpụrụ. Enwere ike itinye teknụzụ a n'ọrụ na ntanetị na n'ịntanetị yana maka ụdị azụmaahịa ọtụtụ.
Anyị ga-amalite site na ịkọwa etu tokenization si arụ ọrụ. Mgbe mmadụ ji kaadị ha kwụọ ụgwọ na ụlọ ahịa, ma ọ bụ n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ n'ịntanetị, enwere ike ịchekwa data nke kaadị a ka ọ ghara ịbanye ha na nzụta ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ. Iji mee nke a, a ghaghị ịmepụta akara aka pụrụ iche nke ejiri kaadị ahụ mee, ebe ọ bụ na echekwaghị data n'ezie iji zere wayo ma ọ bụ ihe egwu ndị ọzọ. A ga-echekwa ihe ndị a mepụtara na nchekwa ma nwee ike iji ya maka nchịkọta n'ọdịnihu (mgbe niile ikike ikike nke onye ọrụ).
Ọ bụ nhọrọ dị ọhụrụ na avant-garde iji kpokọta ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe ndị ụlọ ọrụ ndị a na-ere n'usoro ntanetị. Ruo n'ókè ụfọdụ na ha nwere ike ịbụ azịza nye nsogbu gị. Na usoro nke ịba uru nke nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ọdịmma ọkachamara gị site ugbu a. N'ihe ozo ndi ozo banyere okwu a ma obu omenala.
1 Pụtara nke tokenization
2 Kedu ka usoro ịkwụ ụgwọ a si arụ ọrụ
3 Uru ya n'iji ya
4 Nkwụnye ego na ụzọ nkwụghachi
5 Kedu ụdị mkpuchi dị iche iche ntanetị ndị a na-enye?
6 Sistemụ nchekwa
7 Ọrụ ndị ahịa
8 Ọnụnọ na mgbasa ozi mgbasa ozi
Pụtara nke tokenization
Echiche ọhụrụ a emepụtara mgbe etinyere ya na nchekwa data, ọ bụ usoro nke dochie ihe mmekorita nke ihe nzuzo na ihe na-emetụtaghị ya, nke a na-akpọ akara aka, nke na-enweghị nkọwa ma ọ bụ uru bara uru ma ọ bụ nke bara uru. Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, n'ihe banyere ụzọ ịkwụ ụgwọ, site na mbido mbido, ọ bụ ndapụta nke ụdị azụmaahịa ọhụụ pụtara na nkwụsị nke akụ na ụba dijitalụ. Uru ndị ụdị azụmaahịa ọhụụ a wetara (mmụba ahịa dị elu, onyinye ahaziri iche, ahụmịhe dabara maka mkpa ndị ahịa) tụgharịrị ngwa ngwa gaa na mgbanwe ndị a ga-etinye n'ọrụ iji kpuchido data ndị ahịa nwere ike igosipụta na ịzụta.
Kedu ka usoro ịkwụ ụgwọ a si arụ ọrụ
N'ọnọdụ ọ bụla, a ghaghị imesi ya ike na ọrụ nke tokenization dị mfe ma, ịchekwa ụzọ dị anya, anyị nwere ike ichikota ya n'ụzọ atọ:
Na-enye ihe (onye ahịa a nweburu akara aka ya na PAN ya);
Nkwado (ezigara akara ahụ na netwọọdụ kaadị kredit iji hazie azụmahịa ahụ na netwọkụ a na - egosipụta akara aka, nweta PAN na ọ na - ezigara ya na ụlọ akụ nwe kaadị wee nata nkwenye site na ụlọ ọrụ ego ahụ);
Ikike (Ozugbo anabatara nkwado nke azụmahịa ahụ, netwọk ahụ na-agbanye PAN ma zigara ndị na-ere ya ikike).
Uru ya n'iji ya
Ọ bụ ezie na n'aka nke ọzọ, enwerekwa ọtụtụ elele ọ ga - enye ndị na - ahụ maka azụmaahịa dijitalụ a. N'ime ndị na-apụta ìhè ụfọdụ n'ime ndị anyị ga-ekpughere gị n'okpuru. Otu n'ime uru nke atụmatụ a nyere bụ ihe ndị anyị ga-atụnye site ugbu a gaa n'ihu:
Wepụ mbiputegharị nke ozi data ndị ahịa na gburugburu ebe ịkwụ ụgwọ ọ bụla.
Ihe nrịba ama ndị a anaghị agbanwe agbanwe n'ihi ya ọ ghọrọ ozi na-abaghị uru maka ndị ọzọ iji nweta ha.
Mma na ngwa ngwa na azụmahịa.
Site na ịchekwa ihe dị iche iche na ọ bụghị ihe ọmụma kaadị dị nro, ndị na-ere ahịa nọ n'ọnọdụ ka mma iji bulie ụkpụrụ nchebe data ha.
Site na ịmachi ọnụ ọgụgụ nke sistemụ na-enweta ozi kaadị akwụmụgwọ, ọ na-ebelata ikike nke PCI DSS nnabata ma mee ka ọ dị mfe ịnweta asambodo na obere ihe.
Ọ dịghị mkpa iji mejuputa njikwa ejikọtara yana data nzuzo, n'ihi na a naghị ewere akara ngosi a ka data nzuzo.
Ọ na-eme ka ọnụnọ nke ụlọ ọrụ eletrọniki ndị ọzọ nwere ụkpụrụ nchekwa ka mma, ha niile na-arụ ọrụ ụfọdụ nyiwe ngosipụta dị adị.
Nkwụnye ego na ụzọ nkwụghachi
N'ezie, ọ bụ uru. Ma na nyiwe nke njirimara ndị a enwere ike ịrụ ọrụ ego ndị a en ego fiat dịka ọ dị na cryptocurrencies dị. Banyere nke mbụ nke ụdị, ha nwere oke ego: euro na US dollar, n'etiti ndị kachasị mkpa. Izute atụmanya nke ndị ọrụ Europe.
Enwere ike ịme mmegharị a site na ụzọ ịkwụ ụgwọ abụọ. N'otu aka, site na kaadị kredit na debit nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị azụmahịa niile: VISA, MasterCard ... Ma na nke ọzọ, site na ịnyefe ego na ego ndị e kwuru n'elu. Enweghị ozi gbasara ngalaba a.
Kedu ụdị mkpuchi dị iche iche ntanetị ndị a na-enye?
Ruo ugbu a, usoro ntanetị a na-enye ihe karịrị ego iri dijitalụ. N'ime ha bụ ụfọdụ n'ime ihe kachasị mkpa. Na-enye gị ohere ịme arụmọrụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ azụmaahịa dị n'ịntanetị na Bitcoin (BTC), ETH (Ethereum) na Bitcoin Cash (BCH), n'etiti ndị a kacha mara amara.
N'ezie, a na-agbakwunye ego ọhụrụ kwa afọ. Ọ bụ ezie na enweghị ike nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ nke njirimara ndị a. Enwere ike ịsị na ọ bụ ezigbo nhọrọ iji rụọ ọrụ na azụmaahịa eletrọniki nwere cryptocurrencies kachasị ewu ewu n'oge a. Ma na ụfọdụ, ọ bụghị site na nke kachasị ọhụrụ na nke a bụ eziokwu iji buru n'uche.
Ebe ọ bụ na usoro ntanetị ndị a na-enye usoro nchebe nke a ga-enyocha dị ka nke a nabatara na nke a pụrụ ịdabere na ya. Iji zere ihe omume na blockchain. Ọ nwere ọkwa nche dị iche iche iji kpuchido arụmọrụ. Tụkwasị uche nke ukwuu na ihe bụ nchekwa nchekwa nke ego gị.
N'aka nke ọzọ, ọ na-enye usoro ezoro ezo nke SSL iji nyekwuo nchekwa na njikọ. Nke a bụ ihe na - enyere aka ịtụkwasị obi na arụmọrụ ma ọ bụ azụmahịa nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa mere. Ruo n'ókè ọ na-abụ ihe akaebe doro anya nke mkpa nke ụzọ ndị a iji nye nchekwa dị mkpa karị. Bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị mkpa na onyinye ya ugbu a.
Ọ bụ otu n'ime ike nke usoro ihe ọhụrụ a na-eweta na teknụzụ na ntinye ego ya. Ruo n'ókè anyị ghọtara n'oge na-adịghị anya na mkpa ị na-etinye na mmekọrịta ndị ahịa gị. Isi ntinye ya dị na nkata ndụ na tinye ya na weebụsaịtị gị. Ọ na-aga ụdị arịrịọ ọ bụla, ma teknụzụ ma ọ bụ otu esi esi etinye ego na nkwụghachi nke ego.
Site na tab onwe ya na-enye ohere ịbanye na nkasi obi nke ọma. Enweghị mkpa ịdebanye aha ma ọ bụ ihe ndị ọzọ achọrọ. Ọ bụ ezigbo enyemaka maka nsogbu ọ bụla anyị nwere. A na-enwe ekele maka mmejuputa ya n'elu ikpo okwu.
A na-anọchi anya ụzọ ọzọ site na ndụmọdụ ọdịnala nke ajụjụ a na-ajụkarị ma ọ bụ Ajụjụ. Agbanyeghị na ọ bụghị nke kachasị baa uru na klaasị a nke ndị na-ahụ maka cryptocurrency.
Dị ka ajụjụ dị mfe dịka ndị a:
Otu esi eme nkwụnye ego mbụ?
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ikpo okwu?
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ na iwepụ?
Ngwunye ọzọ anyị nwere ike iji bụ adreesị email gị. Mana anyị ga-echere ogologo oge maka nzaghachi anyị chọrọ. Ma ọ bụ na ekwentị nke mba ya na-efu efu. Ọ naghị arụ ọrụ nke ukwuu ma ọ naghị enyere aka ịkọwa obi abụọ kachasị ndị ọrụ.
Ọnụnọ na mgbasa ozi mgbasa ozi
N’oge n’adighi anya, achoputara ya na ezigbo akuku ahia ma obu uzo n’enye otutu ahia na netwok. Na ọnụ ọgụgụ siri ike nke ndị na-eso ụzọ na-arụsi ọrụ ike na ha. Yabụ na ọ dị n'ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta. N’ebe ụfọdụ dị mkpa, dịka Twitter na Facebook.
Mmejuputa ya na YouTube bu ihe ozo di nkpa. Ebe a kọwara ya otu ị ga - esi rụọ ọrụ na ntanetị a dijitalụ. Ha bụ ọwa bara ezigbo uru ịgbaso maka ndị ọrụ nwere obere ahụmịhe na arụmọrụ cryptocurrency. Ya mere, ọ bụghị ihe ijuanya na oge ndị a nyiwe ndị a nwere obodo na-arụsi ọrụ ike, ọkachasị na mpaghara Europe. Na a nnọọ mkpa nlekota nke arụmọrụ ya.
Ọwa nkwukọrịta ndị a bụ otu n'ime ike nke nyiwe ego a. Na mmụba kwa afọ na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ. Ma na-enweghị iru ogo nke ndị na-eduzi ọrụ na mpaghara ahụ.
N'okwu ọ bụla, ọ dị ezigbo mkpa iji mesie ike na ọrụ ndị a anyị enyochala na-ekewa site na mgbochi ma ọ bụ isiokwu iji mee ka ọ dị mfe idozi nsogbu anyị nwere. Enwekwara ntuziaka nke ezubere iji kọwaa akụkụ ndị dị mkpa anyị ga-amata gbasara cryptocurrencies. Anyị nwere ike ịmụ maka Bitcoin na Ethereum, gụnyere ihe ha bụ, otu ha si arụ ọrụ, na ihe kpatara ha jiri dị mkpa na ngalaba nke cryptocurrency.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Yourlọ ahịa dijitalụ gị ọ dị mkpa maka akara ngosi?
Ngwaọrụ SEM kacha mma 7 ị kwesịrị ịnwe